၅၂ ယူရိုဖြင့် VKWORLD vk700 Pro ကိုရယူပါ Androidsis ပါ
VKWORLD vk700 Pro Phablet ကိုယူရို ၅၂ ဖြင့်သာရနိုင်သည်
Francisco Ruiz | | Android ထုတ်ကုန်များ, NOTICIAS, လဲ tutorial
ဒီနေ့ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ ၅၂ ယူရိုသာအတွက် Phablet VKWORLD vk700 Pro တစ်ခုလုံးကိုရယူပါ အမြဲတမ်းဝယ်ယူနေသည့် Flash အရောင်းအ ၀ ယ်များအားဖြင့်၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏မြို့ရိုးကြီး၏တိုင်းပြည်မှနည်းပညာထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းစတိုးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏နှုတ်ကိုစတင်ဖွင့်ရန်သူတို့အားပြောပါ VKWORLD vk700 Pro ၎င်းသည်၎င်း၏ကြီးကျယ်မြင့်မားမှုကြောင့် Phablets အစိတ်အပိုင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့် terminal တစ်ခုလုံးဖြစ်သည် ၅.၅ လက်မ LCD မျက်နှာပြင် နှင့် HD resolution ဖြင့် 1280 x 720 pixels ရှိပြီး Mediatek ပရိုဆက်ဆာသည်၎င်း၏အဓိကနေရာတွင်ရှိသည် MT6582 Quad Core 1,3ghz တ ဦး တည်းမှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူအများဆုံးနာရီမြန်နှုန်း 8 Gb RAM ကို သိုလှောင်မှုပမာဏ 8 Gb အထိသိုလှောင်နိုင်သည့်ပမာဏမှာ 64 GB အထိသိုလှောင်နိုင်သည့် Memory Card များဖြစ်သည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်နောက်ထပ် terminal တစ်ခုသေချာသည်။ Android entry range အတွက်အလွန်သင့်လျော်သည် စိတ်ပျက်ဖွယ်ဈေးနှုန်းကိုဒေါ်လာ ၅၉.၉၉ ဖြင့်ရရှိရန်ထူးခြားသောအခွင့်အလမ်းသုံးခု၊ သို့မဟုတ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, ရေကြောင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုပြောင်းလဲရန်အကြောင်းကို 52 ယူရို။ ထို့နောက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ «ဤစာကိုဆက်ဖတ်ရှုပါ» ဒီ VKWORLD vk700 Pro ကိုယူရို ၅၂ အတွက်သာယူရမည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သည်
1 VKWORLD vk700 Pro ၏နည်းပညာအပြည့်အစုံ
2 ကျွန်ုပ်၏ VKWORLD vk700 Pro ကိုဒေါ်လာ ၅၉.၉၉၊ ၅၂ ယူရိုသာ ပြောင်းလဲ၍ မည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။
VKWORLD vk700 Pro ၏နည်းပညာအပြည့်အစုံ
ပုံစံ vk700 Pro ကို
operating system အန်းဒရွိုက် 4.4.2 Kit Kat
ဖန်သားပြင် ၅ လက်မအရွယ် HD5x5pixel resolution 1280D နည်းပညာနှင့် Corning Gorilla Glass protection တို့ပါဝင်သည်
Processor ကို ၁.၃ Ghz ရှိ Mediatek MTK 6582 Quad Core
GPU ကို 400 MHz နှုန်းဖြင့်မာလီ2mp500
ရမ် 1 Gb
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 8 GB အထိအသုံးပြုနိုင်ပြီး microSD အထိအများဆုံး 64 GB အထိထောက်ပံ့နိုင်သည်
ရှေ့ကင်မရာ5Mpx ကို Sony မှထုတ်လုပ်သည်
နောက်ကင်မရာ ၁၃ Megapixel ကို Sony မှ FullHD တွင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနိုင်သည့်ပမာဏ ၃၀ fps ဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်
ဆက်သွယ်မှု 2G-3G-DualSIM-Bluetooth 4.0-GPS-aGPS
သီးသန့်အင်္ဂါရပ်များ ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိစမတ် Gesture - အခမဲ့ Smart Gesture ကိုထိပါ
ရှုထောင့် 78 155 7.6 မီလီမီတာ
အလေးချိန် 180 ဂရမ်
ဘက်ထရီ 3200 mAh လီသီယမ်ပေါ်လီမာ
စြေး flash ကိုရောင်းအားအတွက် $ 59 (မူရင်းစျေးနှုန်း ၈၅'၉၉ ဒေါ်လာ)
ကျွန်ုပ်၏ VKWORLD vk700 Pro ကိုဒေါ်လာ ၅၉.၉၉၊ ၅၂ ယူရိုသာ ပြောင်းလဲ၍ မည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။
ငါပြောခဲ့သလိုပဲဒီထုတ်ကုန်ရဲ့မူလစျေးနှုန်းကကုန်သွားပြီ 85,99 $ဈေးနှုန်းချိုသာပြီးဒေါ်လာ ၅၉.၉၉ သာရောင်းချနိုင်ပြီးဈေးနှုန်းကန့်သတ်ချက်ရှိပေမယ့်လည်းအရောင်းအ ၀ ယ်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါဘူး။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၁ နှင့် ၂၈ ရက်များ၌ပထမဆုံး ၀ ယ်ယူသူများအတွက်ရောင်းရန်ယူနစ် ၃၀ သာရှိသည်.
ဒီထဲကတစ်ခုရရန် VKWORLd vk700 Pro ကို ၅၉.၉၉ ဒေါ်လာသာကျသင့်သည်ပြောင်းသွားဖို့ယူရို ၅၂ နဲ့တူတာကဘာလဲ၊ ထိုအချိန်ကာလသုံးခုအနက်မှတစ်ခုသာသင်ဤ link ကိုနှိပ်ပါ။ ပထမတစ်ခုမှာနောက်တစ်ခုဖြစ်သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်တစ်ပါတ်အကြာတွင်ဒုတိယ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက် နေ့ကဒီ flash ကိုရောင်းအဆုံးသတ်ရန် အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်၊.
သင်သည်ဤဆိပ်ကမ်းတစ်ခုမှရိုးရိုးစျေးနှုန်းကိုယူရို ၅၂ ယူရိုယူလိုလျှင်ဤစာမူကိုသင်၏အကြိုက်ဆုံးများထဲတွင်သိမ်းဆည်းရန်သင့်အားအကြံပေးသည်။ နောက်ရက်အနည်းငယ်တွင်သင်သည်အမြဲတမ်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ဝယ်ယူခြင်းအတွက်ပထမဆုံးပြုလုပ်မည့်သူဖြစ်ရန်သတိပေးချက်တစ်ခုထည့်ပါ။ ငါဆိုသည်ကား၊ ဒီ flash ရောင်းချမှုကိုရောင်းပထမ ဦး ဆုံး 30 ကိုကန့်သတ်ထားသည် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောကာလ၏တစ် ဦး ချင်းစီ၏။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » VKWORLD vk700 Pro Phablet ကိုယူရို ၅၂ ဖြင့်သာရနိုင်သည်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးညတစ်ညလုံးညစာစားပြီးရုပ်မြင်သံကြားဖွင့်ပြီး telemarketing အတွက်ကြော်ငြာရှာတာမနက် ၅ နာရီမှာအိမ်ကိုပြန်လာသလိုခံစားရတယ်။
အခုတော့အလေးအနက်ထားပြောရရင်သင်ရောင်းဖို့ကြိုးစားတာအရမ်းဆိုးတယ်လို့ထင်တယ်။ အနည်းဆုံးတော့ဆောင်းပါးကပံ့ပိုးပေးတယ်ဆိုတာသင်တွေ့နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ဆောင်းပါးကိုကောင်းတဲ့အရာအဖြစ်တင်ဖို့ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုမစော်ကားပါနဲ့။
ခင်ဗျားဟာရှုပ်ထွေးနေတယ်ထင်တယ်၊ ဒါကအင်တာနက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုထောက်ခံတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပဲ။ စာဖတ်သူတွေအတွက်အရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခု။
စိတ်ဝင်စားစရာလား။ ဆဲလ်ဖုန်းမကောင်းဘူးလား။ မေးခွန်းကိုအခြားနည်းဖြင့်မေးပါ။ ကြည့်ပါ။ မင်းရဲ့နှာခေါင်းကိုဒီမှာထားပါ၊ ပေါင် ၅၂ လောက်နဲ့အမှိုက်တွေနံလိမ့်မယ်
ငါက Latino မို့လို့၊ ဒါပေမယ့်တကယ်ကြိုက်တယ်၊ အဲဒါကသင်္ဘောတင်ခအတွက်ပိုစျေးကြီးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအဲဒါကိုကောင်းကောင်းမြင်တယ် ...
ပျော်စရာကတ်ထူအက္ခရာများသည် Paper Monster Recut ဖြင့်ပြန်လာသည်
Raywar: Pandemonium, ရောင်စုံရောင်စုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုနှင့်အတူချိတ်ဆက်နေသောသေနတ်သမားဖြင့်သင်၏ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်